Iindaba-Uyithengisa njani indlela yakho yokuphuma kwishishini
Iinkampani ezininzi zibhengeza ngokwenyani indlela yazo yokushishina ngeempawu ezisezantsi. Ezi nkampani zibonakala ngathi azilifumani ifuthe elibi kakhulu olu hlobo lweempawu ezinokuba nalo.
Uphononongo lwakutsha nje oluqhutywa nguGqirha James J. Kellaris weKholeji yaseLindner yeShishini kwiYunivesithi yaseCincinnati inceda ekukhanyiseni ukubaluleka kweempawu ezikumgangatho ophezulu. Iziphumo zophando zibonisa ukuba abathengi bahlala befaka umgangatho kumashishini ukusuka kumgangatho weempawu. Kwaye ukuqonda okusemgangathweni kuhlala kukhokelela kwezinye izigqibo zabathengi.
Umzekelo, oku kuthathelwa ingqalelo komgangatho kuhlala kukhokelela kwisigqibo somthengi sokungena okanye ukungangeni kwishishini okokuqala. Ukwakha ukugcwala kweenyawo zabathengi ngokuqhubekayo kuyimetrikhi ebalulekileyo kwivenkile yokuthengisa enenzuzo. Olu phando lukazwelonke lubonisa ukuba uphawu lwekhwalithi ephezulu lunokunceda kuloo njongo.
Kule meko, "umgangatho weempawu" awuthethi kuphela imeko yomqondiso wophawu lweshishini. Inokuthetha ukuyilwa kwemiqondiso kunye nokusetyenziswa. Umzekelo, uphononongo luthi ukuba semthethweni yenye indawo yokuqonda umgangatho womqondiso wabathengi, kwaye i-81.5% yabantu baxela ukuba bayadana kwaye bacaphuke xa imiqondiso yesignature incinci kakhulu ukuba ingafundwa.
Ukongeza, umgangatho ungabhekisa kulungelelwaniso loyilo lweempawu lulonke olo hlobo lweshishini. I-85.7% yabaphenduli besifundo bathi "imiqondiso ingabonakalisa ubuntu okanye isimilo seshishini."
Ukujonga elinye icala ledatha yolu phononongo, imiqondiso esemgangathweni osezantsi inokuqwalaselwa njengendlela yentengiso yenkampani ngaphandle kweshishini. Uphononongo luthi i-35.8% yabathengi itsaliwe kwivenkile engaqhelekanga esekwe kumgangatho weempawu zayo. Ukuba ishishini liphulukana nesiqingatha sabathengi abatsha abahamba ngeenyawo ngenxa yemigangatho esezantsi yomgangatho, oko kuguqula malini kwingeniso yokuthengisa elahlekileyo? Ukusuka kuloo mbono, imiqondiso esemgangathweni osezantsi inokuqwalaselwa njengomkhondo okhawulezayo wokungabinamali.
Ngubani owakha wacinga ukuba ishishini linokubhengeza indlela yalo yokuphuma kwishishini? Uluvo luphela lubonakala ngathi alunakuphikiswa, kodwa uphando lwangoku lweshishini lubonisa ukuba kunokwenzeka ngeempawu ezisezantsi.
Umqondiso olungileyo njengezantsi:
Ixesha Post: Aug-11-2020